Ungayithengisa njani iPinterest ngokufanelekileyo? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ukuthengisa ngokusebenzisa uthungelwano lwasentlalweni yenye yeendlela eziphambili zanamhlanje, imeko kwihlabathi ikhokelele iinkampani ezininzi ukuba ziphinde zizibuyise ukuze ziqhubeke ngaphakathi kwintengiso, ubhubhane., ukhuphiswano kunye nokuvela kwamashishini amatsha Ngomgangatho olungileyo wokukhetha ezizezinye ngamaxabiso aphantsi, kwenza ubunzima bokutya bube nzima kwiinkampani.
Iinethiwekhi zentlalo ziyayazi le meko kwaye yiyo loo nto zivulekile iindawo zentengiso ezibandakanya wonke umntungokubhekisele kumba wezorhwebo, ewe. IPinterest yenye yezi nethiwekhi zentlalo kwaye ukuvulwa kwayo kunike amathuba amatsha kwintengiso kubasebenzisi bayo, kwaye ke itsale abathengi abatsha kubo nakwabo bathengisa kweli qonga.
Umxholo wentengiso uhlala ubuthathaka, ukusukela oko kutyalo mali Koosomashishini, ukuba utyalo-mali, hayi inkcitho, ukuba intengiso yenziwa ngokufanelekileyo, inokuba sisitshixo ekutsaleni abathengi abathembekileyo nangakumbi, yiyo loo nto ngaphambi kokuba wenze naluphi na uhlobo lwesibhengezo, kungcono ufumane ingcebiso ngokufanelekileyo.
Le nethiwekhi yentlalontle ineethagethi ezingaqhelekanga zabasebenzisi, kwaye phantse ama-70% aba ngamabhinqa, into ethetha ukuba abo babona intengiso ngabasetyhini, ke ngoko, iintengiso kufuneka ube nomxholo omkhulu weemvakalelo kwaye ubuthathaka ngakumbi, azinakuba zi-brusque, kwaye ukuba kutheni ungatsho ngeklasi engaphezulu.
Le app ine ezahlukeneyo zentengiso ezixhomekeke kwiimveliso kunye nencasa yabantu abazithengisayo:
Zibekwe kwi- iqonga lasekhaya iphepha, Kwaye zibonakala njengesiphumo sokukhangela njengayo nayiphi na enye ipini, kodwa rhoqo kunezinye izikhonkwane, oku kwenziwa ukwenzela ukwandisa ukufikelela kubasebenzisi.
Le yenye yeenzuzo ezintsha ezibonelelwa sisicelo kwaye ibisaziwa kakhulu phakathi abasebenzisi ababhengeza iphephaUkusukela ngelixesha abathengi abanokwenzeka bacinezela kwintengiso eli nyathelo liyiphambukisa ngqo kwiwebhusayithi yomthengisi.
Le yenye yezona zinto zangoku, ziluhlobo lwentengiso olusebenza kakuhle kubasebenzisi abayisebenzisileyo, zilula nje uthotho lwemifanekiso engama-20 Imifanekiso, amakhonkco, itekisi iyaxatyiswa, nantoni na umthengi ayifunayo, imfihlelo yempumelelo yayo ngumbutho wolwazi olunikezelayo.
Igama lakhe liyayicacisa, nje ukuba umthengi onokubakho acofe isikhonkwane somdla wakhe, iya kumvumela yenza ukuthengwa kube lula ngakumbi, cinezela nje kwipini kwaye ngale ndlela inkqubo ikuvumela ukuba uthenge.
1 Intengiso kwiPinterest:
2 Iintengiso zePinterest:
3 Izikhonkwane zokunyusa:
4 Izikhonkwane zokuchukumisa:
5 Iphini yebali:
6 Ivenkile yokujonga: